आज जेठ १ गते आइतबार, राशिफल हेरेर गर्नुहोस् तपाईको आजको दिनको सुरुवात ! « Sansar News
आज जेठ १ गते आइतबार, राशिफल हेरेर गर्नुहोस् तपाईको आजको दिनको सुरुवात !
कर्मयोगको विशेष फल प्राप्त गर्ने समय छ। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। आयआर्जन बढ्नेछ भने उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुनेछ। कृषि, पशुपालन तथा व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ। चल–अचल धनको उपयोगबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ। मिहिनेत गर्दा दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ। ऋण तथा कर्जा पनि चुक्ता गर्न सकिनेछ।
शरीरमा कमजोरी तथा आलस्य अनुभूति हुनेछ। अवसरवादीहरूले फसाउने चेष्टा गर्नेछन्। आफ्ना वस्तु तथा काममाथि अरूले नियन्त्रण गर्न सक्छन्। अध्ययनमा समय दिन नसकिएला। आर्थिक लाभ नहुने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। सामूहिक काममा हात हाल्नुअघि विचार पुर्याउनुहोला। आफ्ना कमजोरी बाहिर आउनाले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ।
२०७९ जेठ १ गते, आइतवार, (१५ मे २०२२)
तपाईको आज शनिबारको राशिफल, हेर्नुहोस् आज क–कसलाई छ त फाईदा !